Ukuphupha ibha Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Sibhekisa kwizixhobo ezinde zokuthwala umthwalo kunye nezixhobo zenkxaso ezinje ngemiqadi, ethi yenziwe ngokubanzi ngomthi, ngentsimbi, okanye ngekhonkrithi. Njengezinye izinto ezininzi kunye nezinto zokwakha, imivalo ngamanye amaxesha inokuvela njengeempawu kumaphupha ethu. Unokujonga ngokusondeleyo kwibha kwimeko ethile yamaphupha.
Mhlawumbi uhlangabezana nenye kwaye uziva iintlungu. Kwiimeko ezinqabileyo, i-barbell inokubonakala ephupheni ngaphandle kokusebenza ngokucacileyo, umzekelo ukuba ayakhelwanga ngaphakathi kodwa inokunxitywa ngokukhululekileyo.
Kodwa kuthetha ntoni kanye xa ibha ibonakala njengomfanekiso kumaphupha ethu? Ithetha ntoni le nto?
1 Uphawu lwephupha «ibha» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ibha» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ibha» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ibha» - ukutolikwa ngokubanzi
Kutoliko ngokubanzi lwamaphupha, ibha ngokusisiseko ithathwa njengophawu oluqinisekileyo. Umfanekiso wephupha umele owasekhaya kunye nowaziwayo. Suerte. Kubomi babucala, yonke into iyaqhubeka ngokwanelisa umntu oleleyo. Bahlala kunye ngokuvisisana. Okuchasene kunokusebenza kuphela ukuba ibha kwimeko yamaphupha indala okanye yaphukile. Kule meko bayasongela ilahleko kunye nokuxabana.
Uhlalutyo lwamaphupha ngokubanzi litolika ibha ngakumbi, nokuba iphupha liyangqubana nayo. Umfanekiso wephupha ufuzisela kwezi meko Iingxakiethintela ukukhula ngokukhululekileyo kweqela elinomdla. Ukuba ibha yokubetha isemhlabeni, oku kukwabonisa imiqobo ekunzima ukuyoyisa.
Imeko yamaphupha apho umntu oleleyo kufuneka ephethe umqadi ukwangumqondiso OmncinciOko akunakugcinwa kwaye kuthintele nophuhliso lomntu. Oku kunokuba luxanduva, umzekelo. Ukuba umqadi uxhaswa yintsika ephupheni, kufuneka umntu aqonde ukuba ubomi bakhe bakhelwe kwisiseko esihle.
Akunakwenzeka ukuba kwenzeke ephupheni ukuba ibha ilahlwe kude okanye inikwe. Iimeko ezinjalo zephupha ziyahamba iimvakalelo zokuziva unetyala gqiba. Umphuphi akakwazi ukuzivuma iimpazamo zakhe. Endaweni yoko, zama ukuzikhulula kwityala lakho. Khetha i-scapegoat yokugxeka amatyala akhe.
Ukuba ubetha isikhonkwane sokugqibela ngexesha lomnyhadala wokugqibezela ephupheni lakho, uya kufuna ukuqala into entsha el mundo yeewotshi.
Uphawu lwephupha «ibha» - ukutolikwa kwengqondo
Kutoliko lwengqondo ngokwamaphupha, ibha ifanekisela Ilitye lembombo yobomi bakho. Imele into umntu achaphazelekayo ayisekele kubukho bayo. Ibha ke iluphawu lweekhonsepthi zokuziphatha eziqinisiweyo, amaxabiso kunye neempawu zobuntu ezenza iphupha.
Ukuba ibha ibonakala kwimeko yephupha njengomqobo njengomqobo, oku kubonisa ukuba umntu oleleyo ngu indlela eyiyo ayinakuziqonda ngokwayo. Uhlalutyo lwengqondo lwephupha lubona kwisimboli "ibha" emva koko kubhekiswa kwiimeko ezithintela iphupha ekufumaneni indawo yalo ebomini. Yonke ngoku kwaye unamathele nayo duda ngokwexabiso labo kunye nombono wangaphambili wehlabathi emva kwabo.
Uphawu lwephupha «ibha» - ukutolika kokomoya
Kwiphupha lokomoya, ibha ifanekisela imigaqo kwaye Iinkolelo. Ukwenza kunye nokucinga kwephupha kusekwe kwezi.